Jun 30, 2021 06:56 PM Merolagani
बेजोस र एमेजनको प्राथमिक लक्ष्य–वृद्धि
एमेजनको पाङ्ग्राको बीचमा वृद्धि छ। त्यो पाङ्ग्रालाई घुमाउने ६ क्रियाकलापहरुः
अधिक चयन र सुविधा
कम लागत संरचना
कम मूल्यले ग्राहकको आवागमन बढाउने देखिएको छ। धेरै मानिसहरु आएमा व्यापार बढ्ने सम्भावना हुन्छ। बढ्दो बिक्रीको भोल्यूमले कमिशन दिने तेस्रोपक्ष बिक्रेतालाई आकर्षित गर्दछ। यसले एमेजनको पूर्ति केन्द्र र आईटी पूर्वाधार जस्ता निश्चित लागतबाट धेरै प्राप्त गर्न सहयोग गर्यो। त्यसपछि अधिक क्षमताले उसलाई अझ मूल्य कम गर्न सक्षम बनायो। यस्तो सकारात्मक प्रतिक्रियाले कम्पनीको वृद्धिलाई अझ तिव्र पार्न टेवा दिएको छ।
स्पष्टता र ड्राइभ रणनीति प्राप्त गर्न एमेजनले फ्लाई व्हील रणनीति प्रयोग गरेको छ।
यसले संस्थाहरुलाई कस्ता जोखिमहरु लिने र कस्ता अवसरलाई लिने जस्ता कुराहरु सिकाउँछ। जब तपाई आफ्ना निर्णयहरुलाई आफ्नो चक्काको माध्यमबाट फिल्टर गर्नुहुन्छ, तब आफ्नो स्रोतलाई ती कुराहरुमा केन्द्रित गर्नुहोस् जसले तपाईको चक्कालाई लक्ष्य तर्फ अघि बढ्न सहयोग गर्दछ। तपाईले मोमेन्टम पाउनुहुनेछ र एमेजनजस्तै वृद्धि गर्नुहुनेछ।
बेजोस छिटो निर्णय लिन्छन्
अहिलेको तिव्र गतिको समयमा, व्यवसायहरुसँग पहिलेजस्तो आरामले सोचेर निर्णय गर्ने समय छैन। कि त कम्पनीहरु निर्णय गर्न नसकेर प्यारालाइज्ड हुन्छ कि त हतारमा ठूलो निर्णय गरेका कारण अनावश्यक जोखिममा पर्छन्।
बेजोस दुई प्रकारका निर्णय गरी यसलाई हल गर्थे
पहिलोः ठूला परिणामहरु सहितको एकतर्फि ढोका जहाँबाट फर्किने कुनै सम्भावना छैन (जस्तै, जागिर छोड्नु, कम्पनी बिक्री गर्नु)
दोस्रोः कम परिणाम सहितको दुईतर्फि ढोका जहाँ केही कुराहरु मिलाउन सकिन्छ (जस्तै, साइड विजनेस शुरु गर्ने, नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्ने)
बेजोस मान्दछन् कि अधिकांश असफलता घातक हुँदैनन् र अधिकांश निर्णय अपरिवर्तनीय हुँदैनन्। उनी भन्छन्, ‘हामीलाई सबै जवाफ थाहा छैन, तर यहाँ केही सोचहरु छन्। अधिकांश निर्णयहरु परिवर्तन गर्न सकिने दुई तर्फि हुन्छन्। ती निर्णयहरुको हल्का प्रक्रिया हुन्छन्। त्यसको लागि, तपाई गल्ती भएमा के हुन्छ?’
बेजोस पर्याप्त सूचनापछि मात्र निर्णय गर्थे
अधिकांश निर्णयहरु सम्भवतः तपाईले आफुले चाहेको ७० प्रतिशत सुचना प्राप्त गरिसकेपछि लिनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाई ९० प्रतिशतलाई पर्खेर बस्नुभयो भने, अधिकांश अवस्थामा तपाई ढिलो हुनुहुनेछ। त्यसका साथै, तपाई एकैपटकमा नराम्रा निर्णयहरुको छिटो पहिचान गर्ने र त्यसलाई सच्याउनेमा पनि राम्रो हुनुपर्छ। यदि तपाई सच्याउनमा राम्रो हुनुहुन्छ भने, गलत हुने तपाईले सोच्नुभएकोभन्दा कम जोखिमपूर्ण हुनसक्छ, जबकि सुस्त हुनु अवश्य पनि महंगो पर्नसक्छ।
बेजोस सम्झौताभन्दा पनि प्रतिबद्धता चाहन्थे
‘असहमत र प्रतिबद्ध’। यो वाक्यांशले तपाईको धेरै समय बचाउनेछ। अरुको सहमति नभएपनि यदि तपाई कुनै दिशामा दृढ विश्वास राख्नुहुन्छ भने, यसले तपाईलाई सहयोग गर्नेछ, ‘हेर्नुस्, मलाई थाहा थियो हामी यो कुरामा असहमत छौँ, तर के तपाई यसको लागि ममा दाउ लगाउनुहुन्छ? असहमत र प्रतिबद्ध?
महत्वपूर्ण कुरा यहाँ यो छ कि, एमेजनमा लिइने हरेक निर्णयमा सबै सहमत हुनै पर्छ भन्ने छैन। बेजोसलाई सर्वसम्मतिको भोट आवश्यक छैन। त्यसको बदलामा उनी लिइएका निर्णयहरुमा प्रतिबद्धता चाहन्थे। यो एक त्यस्तो दर्शन हो जसलाई उनी आफ्नो संस्कृतिका हरेक हिस्सामा व्यप्त गर्ने प्रयास गर्दछन्।